Efesu 3 | IBhayibheli Elikuyi-Internet | INguqulo Yezwe Elisha
Imfihlo engcwele izohlanganisa nabantu beZizwe (1-13)
Abantu beZizwe bayizindlalifa noKristu (6)
Injongo engunaphakade kaNkulunkulu (11)
Ukuthandazelwa kwabase-Efesu ukuba bathole ukuqonda (14-21)
3 Ngenxa yalesi sizathu mina, Pawulu, isiboshwa + sikaKristu Jesu ngenxa yenu, bantu bezizwe— 2 uma ngempela nizwile ngokuphathiswa kwami + umusa omkhulu kaNkulunkulu ngenxa yenu, 3 ukuthi ngambulelwa imfihlo engcwele ngesambulo, njengoba nje ngabhala kafushane ngaphambili. 4 Ngakho lapho nifunda lokhu, nizokuqaphela ukuqonda kwami le mfihlo engcwele + kaKristu. 5 Kwezinye izizukulwane, le mfihlo ayizange yambulwe kubantwana babantu njengoba manje yambuliwe ngomoya kubaphostoli bakhe abangcwele nakubaprofethi, + 6 ewukuthi, abantu bezizwe abamunye noKristu Jesu ngezindaba ezinhle, kufanele babe yizindlalifa kanye nathi namalunga omzimba akanye nathi + nabahlanganyeli kanye nathi esithembisweni. 7 Ngaba isikhonzi salokhu ngokwesipho samahhala somusa omkhulu* kaNkulunkulu engawunikwa ngokusebenza kwamandla akhe. + 8 Lo musa omkhulu waphiwa mina, + engingumuntu ongaphansi kunomncane kunabo bonke abangcwele, + ukuze ngimemezele ezizweni izindaba ezinhle zengcebo kaKristu engenakuqondakala 9 futhi ngenze wonke umuntu abone ukuphathwa kwemfihlo engcwele, + uNkulunkulu owadala zonke izinto abelokhu eyifihlile esikhathini esidlule. 10 Lokhu kwenziwa ukuze manje, kusetshenziswa ibandla, + kwaziswe ohulumeni namagunya asezindaweni zasezulwini ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu okubonakaliswa ngezindlela eziningi ezihlukahlukene. + 11 Lokhu kuvumelana nenjongo engunaphakade ayakha mayelana noKristu, + uJesu iNkosi yethu, 12 okungaye sinale nkululeko yokukhuluma neyokusondela + sinokuqiniseka ngokholo lwethu kuye. 13 Ngakho ngiyanicela ukuba ningapheli amandla ngenxa yezinsizi zami ngenxa yenu, ngoba izinsizi zami ziletha udumo kini. + 14 Ngalesi sizathu ngiguqa kuBaba, 15 eqanjwe ngaye yonke imindeni yasezulwini neyasemhlabeni. 16 Ngithandazela ukuba ngokuchichima kwenkazimulo yakhe anenze nibe namandla kumuntu eninguye ngaphakathi, + ngamandla esebenzisa umoya wakhe, 17 nokuba ngokholo lwenu uKristu ahlale ezinhliziyweni zenu ngothando. + Kwangathi ningama niqine + esisekelweni nigxile njengezimpande zesihlahla, + 18 ukuze kanye nabo bonke abangcwele nikwazi kahle ukuqonda ngokugcwele ububanzi nobude nokuphakama nokujula, 19 futhi nilwazi uthando lukaKristu + oludlula ulwazi, ukuze nigcwaliswe ngakho konke ukugcwala uNkulunkulu akunikezayo. 20 Manje kulowo ongenza okungaphezu kakhulu kwazo zonke izinto esizicelayo noma esizicabangayo, + ngokwamandla akhe asebenza kithi, + 21 makube yinkazimulo ngebandla nangoKristu Jesu kuzo zonke izizukulwane kuze kube phakade naphakade. Amen.
^ Noma, “somusa ongafanelwe.”